Maqaalo – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Kooxda ISIS ayaa sheegatay in laba ruux oo iyaga katirsan ay dileen wadaad Masiixi ahaa oo ay ku weerareen kaniisad ku taalla Normandy, France, Talaadadii, markaas wadaadka masiixiga ah ay koxodaasi u qabsadeen laheyste ahaan ka hor inteysan middi ku dilin. Mareykanka, ayaa si weyn u cambaareeyay weerarjkaasi, iyadoo uu ugu uga tacsiyadeeyay qoyska iyo saaxiibbada Jacques Hamel. Afhayeen u ...
Arin naxdin leh: Wariyaasha Muqdisho oo ka sheekeynaya tacadiyada ay ku hayaan madaxda DFS
July 25, 2016	Leave a comment 49 Views
Bulshada Soomaaliyeed ee kunool magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho waxaa intabadan ay cabasho ka muujiyaan tacadiyo ay mararka qaar u gaystaan dadka gashan shaatiga Dowladda iyo weliba kuma AMISOM. Wariyaashu waxay kamid yihiin dadka kunool magaalada weliba kooda galaangalka badan, kuwaas meel walba oo wax ka dhacaan booqda. Wariyaasha wardoonayaasha ah ayaa cabasho ka muujiyey tacadiyadda ay kala kulmaan madaxda ...
July 25, 2016	Leave a comment 353 Views
July 2, 2016	Leave a comment 37 Views
Heshiiskan loo yaqaan CEDAW ee la sheegay in lagu sugayo xuuquuqda Dumarka waxa uu ka mid yahay heshiisyo fara badan oo la sheego inay calami yihin kuwaasoo halqabsi looga dhigo ereyo la soo naashnaashay oo ula jeedada tahay in wax magaradku la moodsiiyo wax wanaagsan inay yihiin kuwaasoo badankood ah kuwa khilaafsan Diinta waxna u dhimaya dhaqanka suuban ee umada. ...
Dagaalyahano ka Tirsan Xarakada Alshaab oo La wareegay Deegaano Hoosataga Buula Burde
June 17, 2016	Leave a comment 36 Views
Wararka laga helayo Degmada Buulo-burde ayaa shaagaya in Dagaal yahano ka tirsan Xarakada Al Shabaab ay markale dib ula wareegeen Degaanka Yasooman oo hoostaga Degmada Buulo-burde ee Gobolka Hiiraan ee bartamaha Dalka Soomaaliya. Dadka Degaanka qaarkood ayaa sheegaya in Xarakada Al Shabaab ay hanteen gacan ku heynta Degaanka Yasooman kadib markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay isaga baxeen Degaankaasi. ...
May 7, 2016	Leave a comment 46 Views
Shirkadda caalamiga ah ee HP ayaa shir tiknoolajiyadda la xidhiidha oo horraantii bishii aynu soo dhaafnAy ee Abriil ka dhacay magaalada Versailles ee dalka Faransiiska waxa ay ku soo bandhigtay Kombiyuutarkii ugu casrisanaa ee ay samaysay oo ah nooca ballaca muraayaddiisu tahay 13.3 Inch oo ay shirkaddu u bixisay Spectre. Kombiyuutarkan oo u samaysan qaab laga soo dhegtay shandadaha iyo ...
Daawo:Golaha Guurtida Somaliland oo ka Dooday Tahriibka
May 4, 2016	Leave a comment 49 Views
kalfadhigii 59aad ee golaha oo ka Qabsoomay xarunta golaha guurtida ee ku yaala hargeesa ayaa waxaa looga dooday arimaha tahriibka si adagna waxa ay ugu hadleen waxa sababa tahriibta Daawo muuqaalka